Garowe, Somalia (Cishqi) – Markii la soo hadal qaadao erayga raaxo qaasatan raaxada raga ay jecelyihiin, durbaba waxaa dumarka badankood qalbigooda ku soo dhaco wax aanan caadi ahayn.
Maxaa ka qurux badan marka aad ninkaaga isku soo diyaariso isagana uu isku kaa soo diyaariyo, raaxada si aayar aayar ah kuula bilaabo, kadibna sheekadu sidaa u sii socoto.
Qormada maanta waxaan ku eegi doonaa, bilawga galmada, raaxada raga ay jecelyihiin iyo meelaha ugu dareenka badan raga .
A-Z: Raaxada raga ay jecelyihiin
Waa sidee bilowga galmada?
Waa maxay raaxada galmada tan ugu fiican?
Waa intee meelaha ugu dareenka badan raga?
Ugu dambeys raga waxa ay jecelyihiin
1. Waa sidee bilowga galmada?
Raaxada galmada waa wax cajiib ah, waa dareen qurux badan, waa wax ninka iyo naagta is qaba ay u baahan yihiin laakin dareenkaasi ma garan karo qof walbaa, marka laga reebo qofka sida dhabta ah u fahmaa.
Qof walbaa marka uu guursado wuxuu jecelyahay in uu lamaanihiisa la raaxeysto raaxo waali ah, inuu dareemo dareen aanan caadi ahayn, hadana uma noqdaan sida uu rabo. Maxaa qaldan tollow? Ma ninka ayaanan raaxada dumarka fahansaneyn, mise xaaska ayaanan aqoonin raaxada raga ay jecelyihiin?
In raga ay bartaan raaxada dumarka ay jecelyihiin ma ahan wax fudud, waxaase ka sii fudud In dumarka ay bartaan Raaxada raga ay jecelyihiin.
Barashada raaxada macaan ee ay noloshu u baahan tahay ma ahan wax adag, hadana sidaas ay tahay dumarka iyo raga qaarkood weey ku adag tahay, waxa ay lamaanahooda ka dhigaan kuwo caajis ah oo aan raaxada sariirta xiiso u heynin. Markaas kadib ayeey garanayaan qaladaadkooda.
Haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, markaan soo hadal qaadno erayga galmo (Wasmo) ama raaxo, gabdho badani waxa ay yiraahdaan:
Alla waxaas sow ceeb ma ahan in laga hadlo?
Alla waxaaas miyaa ninkeyga weydiin karaa?
Alla waan ka cabsanayaa inaan weydiiyo raaxada nninkeyga uu jecelyahay
Su’aalaha guurka cusub
Marka uu guurka cusub yahay ama aadan weli guursan waxaa fiican inaad taqaano su’aalahaan, maxaa yeelay waxa ay muhiim u yihiin mustaqbalka guurkaaga.
Maxay jecelyihiin raga?
Xagee ka helaan raaxada?
Ma jiraan wax aysan ragu jecleyn xiliga raaxada?
Maxay qaldaan dumarka xiliga raaxada?
intuu ka yimaadaa qaladaadka ugu badan ee raaxada galmada?
Su’aalahaasi marka aad barato waxaa kuu fududaanayo in aad ninkaaga si qurux badan ula raaxeysato.
2. Waa maxay raaxada galmada tan ugu fiican?
Haddii aan nahay dhalinyaro marka uu guurka nagu cusub yahay waxaa sameynaa qaladaad fara badan. Qaladkaasi ma ahan in dumarka oo kaliya ay sameeyaan ee sidoo kale waxaa qaladkaasi sameeyoo raga.
Marka uu ninka naagtiisa ula dhaqmo sida in uu baaquli biyo ku shubayo, xaaskuna ay noqoto baaquli meel iska yaalo, taasi waxa ay keeni kartaa in raaxada galmada ay noqoto mid caajis ah.
Qofka markuu caajis dareemo waxaa lagu yaqaanaa inuu bilaabo: Halaaqyo badan. Ka waran marka aad halaaqyooto adigoo la raaxesanaayo ninkaaga, muxuu is dhihi karaa?
Jawaabta macquulka ah: Qoftaan raaxada raga ay jecelyihiin waxba kama taqaano.
Raaxada raga A-Z
Xarafka ugu horeeyo ee xarfaha waa A, sidaas si lamid ah raaxada raga ay jecelyihiin waxaa kamid ah in laga soo bilaabo A, meel hoose.
Macnaha waa in marka hore aad isku soo diyaariso ninkaaga, kadibna aad dareensiiso inad isaga u baahan tahay. Waa inaad soo qubeysato, cadeysato, bisiqana iska xiiirto.
Goorta aad soo qubeysaneyso waxaa fiican in aadan ku soo qubeysan saabuun, maxaa yeelay saabuunka waxa uu jirka ka dhigaa mid anan sabiibax ahayn.
Qish: Waxaa jiro shambooyin si gaar ah jirka uga dhigo jir aad umacaan, marka uu ninkaaga jirkaaga taabanayo ka dhigayo mid raaxo leh oo jileec ah.
Intaas marka aad sameyso, ka hor inta uusan ninkaaga imaan guriga, u dir erayo macaan oo dareenkiisa kicinayo qaasatan erayadaan oo kale:
Kadib marka aad u dirto erayadaas waxaa kuu suurto gelayo ogaanshaha ah in ninkaaga uu imaan doono guriga isagoo og inaad rabto in aad la raaxeysato.
Haddii aad xiiseyneyo erayo kaloo badan misana ku saabsan erayda dareenka lehe ee ay raga ka helaan halkaan ka baro: Erayada kiciyo dareenka ninka
Kadib erayadaas, bilaaw in aad xirato dharka jileeca ah qaasatan dharka jirkaaga laga arkayo:
Intaas kadib marka aad sameyso is carfi, iskuna day inaad xubinta taranka ka dhigto pikobello, mid nadiif ah, oo carfoon, hana iloobin gurigana inaad ka dhigto guri aad u udgoon, firaashkuna uu yahay mid sare.
Marka aad waxaas oo dhan ka soo gudubto, u diyaar garow raaxada ninkaaga, gaar ahaan waxa ugu horeeyo ee aad sameyn lahayd marka aad albaabka ka furto. Waxa ugu horeeyo ee aad u sameyneyso ninkaaga ha noqdaan inaad hab siiso, kadibna aad shumis ku bilaawdo, hadaan si kale u iraahdo dhuuqmo adigoo dhoola cadeynayo welibana ku soo dhaweynayo qalbi furan.
Soo dhaweyn kadib, sii cunto macaan, hana yara nasto. Marka aad istiraahdo, xilligaan waa xiligii aad la raaxeysan lahayd ninkaaga, ku bilaaw taataabasho, salsalaaxid.
Xusuusnow raga aad ayeey u jecelyihiin marka ay xaaska iyada ku bilaawdo. Haddii uu xiran yahay funaad ama dhar kale ka bixi, oo ha arko inaad xiiseyneyso raaxadiisa oo ay caawa tahay habeen ka duwan habeenada kale.
Ha is yiraahdo waaw, xaaskaaga waa il baxday, waa ka duwan tahay habeenadii hore. Ha daremo in aad wax badan ka baratay raaxada raga ay jecelyihiin oo aadan isaga caawa wixii ka dambeeyo aadan ka xishooneynin, ama aysan suurto gal ahayn in uu isaga uun kugu bilaabo raaxada galmada marka uu kuu baahdo.
Raxaada sariirta ka hor
5 waxyaaboo oo ay raga jecelyihiin
Dumarka raga ay jecelyihiin
3. Waa maxay meelaha ugu dareenka badan raga?
Waxaa jiro meel badan oo ay raga jecelyihiin ama ay ka kacsadaan. Meelahaas waxaa kamid ah meelahaan.
Laabta iyo Ibta naasaha
Guska iyo Qooraha
Faraha suulasha (cagta hoose)
Meelahani waa meelaha ugu dareenka badan ee raga, waa halka ugu kacsiga badan ee raga, waxa ayna ka helaan kacsi waali ah. Xusuusnow raga oo dhan halkaan kama kacsadaan, laakin inta badan waa ka siman yihiin. Marka aad meelaha qaar taabaneyso ama aad salsalaaxeyso adiga ayaa lagaa rabaa in aad dareenkiisa fiiriso si feejigan.
Fiiro gaar ah: Marka aad baashiyeyneyso ama aad faruuryahiisa dhuuqeyso, isku day in aad isku waqti meelaha u dhawo xubintiisa taranka inaad salsalaaxdo, adigoona taaban geedkiisa (guskiisa)
Markaad sidaas ugu celceliso, dhuuqmada aadan ka joojin waxaa dareemeysaa isagoo qeybta hoose dhaq dhaqaaq ka sameynayo, markaas bilwaaw in aad qabato baahalkiisa.
Qish: Marka aad xubintiisa taranka (guska) gacanta ku salsalaaxeyso, u sameey sida siigada raga oo kale, sidoo kale mari gacantaada saliid guska la mariyo, sida saliida gellka ah ee aan qalalka lahayn.
Marka ay gacantaada qalalantahay waxaad xoq-xoqeysaa ama dhaawaceysaa xubintiisa taranka, sidaa darteed gacantaada ha ahaado mid qoyan oo ha iloobin inaad saliida guska la mariyo isticmaasho.
Sida ugu fiican soo diyaarso kareemka ama saliida inta aadan bilaabin raaxada ninkaaga, qaasatan soo dhigo meel kuu dhaw oo uusan u jeedin.
Raaxada raga ay jecelyihiin ma ahan oo kaliya inaad intaas oo kaliya sameyso ee sidoo kale waa in aad dareen sameyso. Macnaha inaad muujiso raaxada aad daremyso. Raga ma jeclo oo kaliya in loo raaxeeyo ee sidoo kale waxa ay jecelyihiin in la dareensiiyo.
Sidee ku dareensiin karaa ninkeyga raaxada aan dareemayo?
Marka aad isaga la raaxeysaneyso waxa ugu quruxda badan ee la sameeyo ayaa ah muujinta dareenka. Inaad raaxo dareemeyso, marka uu meelaha qaar taataabto oo ay raaxada meel mac mareyso, muuji dareen, sameey dhaqdhaqaaq, indhahana ha isku qaban ee fiiri isaga.
Intaas kadib bilaaw riin, sida aah, ooh ama sameey neef-tuur, hana kaa ahaato mid dhab ah oo aan u ekeyn mid dhalanteed ah. Taasi waa muhiim. Dumarka qaar waxa ay sameeyaan riin, laakin aanan u keyn mid dhab ah.
Dumarka qaar waxa ay riinka ama oohinta galmada bilaabaan mar dhaw, taasina waa mid xaqiiqda ka fog, sida caadada ah raaxada macaan waxa ay ku bilaababtaa neef, dhaqdhaqaa, boobsiis, kadibna sii aayar aayar ah ayeey u sii xoogeysataa.
Riinka ama taaha dumarka waxa uu kamid yahay waxyaabaha xoojiyo kacsiga ninka, marka ay haweeneydu riin/taah sameyso raga intooda badan waxa ay ka helaan raaxo aanan caadi ahayn, waxaa la wareego dhulka, waxaa ka tago ogaalka, raga intoobada badan waa kuwo iswaalo oo isboobsiiyo. Mararka qaarkood waxa ay dumarka ka jiidaan timaha iyagoo aanan ogeyn in ay xanuujinayaan xaasaskooda.
4. Ugu dambeys raga waxa ay jecelyihiin
Raga sida caadada ah waxa ay jecelyihiin dumarka aadka ugu raaxeeyo, si kastaa oo aad u qurux badan tahay, haddii aad dhankaas ka liidato, iska ilow ninkaaga, haddii uu arko inaadan raaxadiisa ku filneyn, waxa uu bilaabi inuu raadiyo qoftoo riyadiisa rumeyn karto. Riyadu wax kale ma ahan ee waa raaxada dhabta ah ee uu raadinayo. Qof dareensiin karto raaxada ugu macaan.
Haddii aad rabto inaad sii barato raaxada raga ay jecelyihiin gaar ahaan raaxada ninkaaga, fadlan halkaan hoose iska diiwaan gali, si aad ula socoto qormo kasta oo aan rabno in aan la wadaagno akhristayaasheena.
Waad ku mahadsantahay inaad Cishqi.com soo booqato, waana ku faraxsannahay in aan wax badan kaa caawinay. Ha iloobin inaad sii faafiso, lana wadaagto asxaabtaada.